Afaka 2 herinandro dia hahazo Android 7 Marshmallow | ny Huawei Honor 6.0 Androidsis
Manuel Ramirez | | Huawei, About us, Android Version
Inona no azonao amin'izany mpampiasa iray dia faly amin'ny findainy? Mety hanavao azy io amin'ny Android Marshmallow alohan'ny hafa ary araraoty ny sasany amin'ireo fahaiza-manao miavaka amin'ny Android lehibe kokoa izay afaka naneho fa manatsara ny fizakantenan'ny terminal izany noho ny rafitra doze. Rafitra iray tompon'andraikitra amin'ny "fifohazana" telefaona matetika matetika mba hampiasana ny fifandraisana data na WiFi hahafahan'ilay mpampiasa mahazo fampandrenesana. Amin'ny alàlan'ny fitantanana ireo fotoana anaovany "mifoha" dia mamonjy bateria be dia be ity maody doze ity rehefa matory ny telefaona, satria ao amin'io fanjakana io no miasa io rafitra io.
Io Android 6.0 Marshmallow dia mankany amin'ny iray amin'ireo terminal mahaliana indrindra novokarin'ny mpanamboatra finday finday fahatelo lehibe indrindra eto an-tany, Huawei. ny Honor 7 no ho azonao tsy ho ela ny anjaranao Marshmallow amin'ny fankatoavan'ny tompona ity terminal mahafinaritra ity. Efa iray volana na mihoatra kely, ny tompon'ny Honor 7 dia afaka nanandrana ny beta an'ny Android 6.0 Marshmallow tao amin'ny terminal misy azy ireo, na dia ireo any amin'ny firenena sasany voafantina ihany aza. Androany dia nanambara ny orinasa fa ny tompona Honor 7 rehetra dia hanana ny fanavaozana Android vaovao amin'ny tobiny ao anatin'ny roa herinandro.
1 Avy amin'ny kaonty Twitter
2 Fanavaozana efa nandrasana hatry ny ela
Avy amin'ny kaonty Twitter
Ity fampahalalana ity avy amin'ny kaonty Twitter an'ny Honor EU ary mampahafantatra fa ireo izay mandray anjara amin'ny programa beta dia hahazo kinova farany avy amin'ny OTA (eny amin'ny habakabaka) tsy ho ela. Na dia havoaka amin'ny dingana aza ireo fanavaozana ireo dia mety hisy fanemorana kely ihany. Ka ankehitriny rehefa nosedraina ny kinova vaovao ary vonona ny hapetraka, ny olon-drehetra dia tokony handray fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA ao anatin'ny roa herinandro ho avy.
Ianareo izay manana ity terminal ity dia hahaliana izany manatona akaiky kokoa ireo seha-pifanakalozan-kevitra ao HTCmanía na XDA hihaino tsara ny famoahana ny OTA, satria azonao atao ny mametraka azy alohan'ny hahatongavany amin'ny faritra misy anao.
Fanavaozana efa nandrasana hatry ny ela
Ny mahaliana dia ny hoe, na dia tsy ny fanavaozana lehibe an'i Lollipop aza i Marshmallow, amin'ny faran'ny andro dia miaraka amin'ny mitovy ihany isika, satria ny 5.0 dia nanomboka nozaraina tamin'ny volana febily lasa teo tamin'ny marika malaza indrindra. Ankehitriny dia mitovy amin'ny Marshmallow. Miresaka momba ny fanavaozana iray izay mbola tsy hianjera amin'ny Galaxy Note 5 vaovao na ny sisin'ny Galaxy S6, na ny Xperia Z5 mbola misy ankehitriny.
Amin'ny raharahan'i Huawei manokana, fahombiazana ho an'ireo izay manana Huawei Honor 7, satria afaka manana Marshmallow sy araraoty ny Google Now amin'ny Tap ary ny fanatsarana ny bateria miaraka amin'i Doze alohan'ireo izay manana Mate S na P8, izay mbola tsy nitsambikina tamin'ity kinova 6.0 ity.
Raha mankany Sony isika, andro lasa izay nifanena taminy izahay, tompon'ny Xperia Z2 na Z3 compact izao dia afaka andrana ny programa beta Marshmallow, raha ireo izay manana ny vaovao avy ao anaty lafaoro Z5, dia tsy maintsy miandry ity beta ity handeha tsara kokoa noho ny nandrasana ary afaka mandefa azy amin'ny volana martsa, izay ilay volana izay heverina fa 6.0.
Azo antoka fa mahita ny tenantsika amin'ny toerana mitovy amin'izany isika amin'ny herintaona rehefa mihaona indray isika momba ny fanavaozana ny ho avy Honor na Xperia, ary fantatray fa io fanombohana ny Android teo aloha io dia sakana lehibe ho avy: ny sosona fanaon'ny mpanamboatra. Manantena isika fa ny mpanamboatra sasany dia hiloka amin'ny kinova Android madio kokoa ary i Sony dia handray anjara amin'ny famoahana an'io "Concept for Marshmallow" ary ho fototry ny rindrambaiko findainao. Io dia hamela ny finday havaozina ao anatin'ny herinandro, satria ny sosona manokana dia mandalo fampiharana maromaro izay havaozina avy amin'ny Google Play Store.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei Honor 7 dia hanana ny anjarany amin'ny Android 6.0 Marshmallow afaka roa herinandro
Ny fampiharana voafaritra hijerena ny baolina kitra maimaimpoana amin'ny Android. (Mifanaraka amin'ny Chromecast sy ny fanoratana efijery)